प्रदेशको समृद्धिका लागि कर तिर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन | Kattwal.com
२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्टले भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्ट तत्कालीन सामन्ती राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरू नेपाली युवाहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर संघर्षमा लागेका हुन् । त्रिलोचन स्व. पिता प्रसाद भट्ट र माता शारदादेवी भट्टका कोखबाट २०२६ जेठ ७ गते केआईसिंह गाउँपालिका–६, फलेडी, डोटीमा जन्मेका हुन् ।
उनले २०४८ साल असार ३ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुम्बई एरिया कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । २०४९ जेठ २५ गते नेकपा एकता केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे । २०५१–५२ मा आन्तरिक रूपले युद्धको तयारीका लागि प्रवासमा आर्थिक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हाले । २०५१ वैशाख २ गते नेकपा माओवादीको इलाका सदस्य र २०५४ वैशाखमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज नवौं मुम्बई नगर कमिटी कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पाए । २०५५ सालमा नेपालमा युवा संघको जिल्ला सदस्य बनेका थिए ।
त्यसैगरी २०५६ मा महाराष्ट्र राज्यको कलाकार समूहमा आबद्ध भई सांस्कृतिक क्षेत्रमा संलग्न भए । २०५७ जेठ ५ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाज महाराष्ट्र समिति कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । २०५७ असार ५ गते नेकपा माओवादीको जिल्ला सदस्य भएपछि जागिर छाडेर पूर्णकालीन युद्धमा संलग्न भए । २०५८ सालमा नेपालमा संकटकाल लागेपछि भारत सरकारद्वारा एकता समाजलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि गठित नेपाली जनअधिकार सुरक्षा समितिको राज्य संयोजकको जिम्मेवारी पनि सम्हाले ।
२०५९ सालमा पार्टी क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य र २०६० मुम्बई जिल्ला पार्टी सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पाएका भट्ट भारतमा चौकीदारदेखि ७ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको जीवनी अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भन्दा पृथक् छ । सामान्य परिवारमा जन्मेका मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश ७ को समृद्धिका लागि निरन्तर अग्रसर छन् । उनले यहाँका युवालाई अन्यन्त्र देशमा रोजगारीमा जानबाट रोक्न र प्रदेश समृद्धिका लागि विभिन्न नीति–नियम लागू गरेका छन् । प्रदेश नम्ब ७ को अर्थतन्त्र र विकास समृद्धिबारे कारोबारकर्मी हिमेश विकले मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरेको कुराकानीको सार :
नियन्त्रणभन्दा पनि तिनीहरूको रोजगारी भनेको महत्वपूर्ण विषय हो । रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा, नीतिगत रूपबाट त्यो विषयलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ र यति छिट्टै त्यसको परिणाम आउने कुरा होइन । हामीसँग औद्योगिक धन्दाहरू छैनन्, कृषि प्रणाली आधुनिकीकरणमा गएका छैनन् । अहिलेसम्म पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा मुख्य मेरो लक्ष्य हो ।
त्यो सिर्जना गर्नका लागि नीतिगत कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौं । त्यो फेरि ६ महिनामै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । मैले त्यतिखेर पनि त्यसो भनेको होइन । मैले सुरुवात हामी गर्छौं र सुरुवात गर्ने लक्ष्य छ भनेको हुँ । त्यसका लागि कार्यक्रम बनाएर लगानीकर्तालाई कसरी भित्र्याउने, यहाँ कसरी उद्योगधन्दा सिर्जना गर्ने, कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि उद्योग कसरी बनाउने, पर्यटन उद्योग कसरी बनाउने र जलविद्युत् कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रारम्भिक सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने विदेश जाने व्यक्ति रोजगारी दिएरै जाने हो । हाम्रो मानसिकता पनि भारतमै गएर रोजगारी गरेर पैसा कमाइन्छ भन्ने छ । अरूभन्दा पनि बाध्यता नै मूल जड हो । नेपालीहरू आफ्नै देशमा त्यो मेहनत गर्नुभन्दा पनि अन्त गएर त्यो मेहनत खर्चिन्छन् । हामीले यो प्रवृत्तिको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
त्यो भइसकेपछि हामीले जुन उपयोगी जमिन प्रयोग गर्नुपर्छ, हिजो बाजेका पालामा त्यो जग्गा प्रयोग गरेर हामीले खाद्यान्न पूर्ति गरिरहेका थियौं । अहिले त्यो जग्गालाई कामविहीन बनाइएको छ । यस्तै कुरालाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याइएको हो । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्छ र कृषिबाटै समृद्धि हुने देखिन्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याएको हो ।
छोराले गरे बुवाको हत्या, आमा गम्भिर घाइते
विरामी बोकेको एम्बुलेन्स दाङमा दुर्घटना
रवि वडको धनगढीमा भब्य स्वागत